Kaydi ama tirtir: Fahmo IOS Mail goobta ugu wareersan | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Kaydi ama tirtir: Fahmo IOS Mail goobta ugu wareersan
Kaydi ama tirtir: Fahmo IOS Mail goobta ugu wareersan
Ma taqaanaa sida marka aad ku dhufato iimaylka iPhone-kaaga ama iPad-kaaga, oo ay ku xidhan tahay jihada aad u dhufato, aad hesho fursado badan? U calaamadee sida wax loo akhriyo, dhaqaaqo, kaydiyo - shay noocaas ah. Laakiin sidee ayaad u habayn kartaa doorashooyinkan? Oo sidee baad u geli kartaa ikhtiyaarka qosolka leh ee si fiican u qarsoon ee kaydinta iyo/ama tirtiridda?
Ikhtiyaarada xawiga boostada ee iOS
IOS 13, waxaad ka heli doontaa habaynta ugu weyn ee barnaamijka Mail app gudaha abka Settings hoostiisa Dejinta> Boostada, sidaad filaysay. Laakin Apple waxa ay xabaalisay habaynta kaydinta iyo tirtirida gudaha goobaha xisaabaadkaaga boostada. Waxaan ku gaari doonaa taas daqiiqad gudaheed, laakiin marka hore, goobaha ugu muhiimsan.
Marka aad hesho Dejinta> Boostada> Xulashooyinka ku dhaq, waxaad arki doontaa shaashadda soo socota (ama wax la mid ah).
Dejinta marinnada boostada.
Iyadoo si cadaalad ah is-sharaxaadda, goobahani waa dhib in la isticmaalo sababtoo ah calaamaduhu kuma sheegaan wax walba. Waa in aad horay iyo gadaal u dhex martaa Boostada iyo abka abka si aad u aragto natiijooyinka. Tusaale ahaan, Bidix mari ikhtiyaarka shaashadda kore ayaa lagu dejiyay Ku calaamadee Akhriso, laakiin haddii aad eegto menu-ku-daaqista dhabta ah ee Mail, waxaad arkaysaa tan:
Kaydka, Calaamadee Aan La akhriyin, iyo in ka badan.
Waxa goobtani runtii qabto, markaa, waa dooro ikhtiyaarka heerka ugu sarreeya ee menu-ku-dhufashada. Tusaalaha kore, waxaan doortay Ku calaamadee Akhriso. Tani waxay ka muuqanaysaa badhtamaha ikhtiyaarka durdurrada ee boostada. Ikhtiyaarada kale ayaa weli la heli karaa gadaashiisa More badhanka. Haddii aan taas beddelkeeda doortay Flag gudaha Settings, ka dibna Calanku waxa uu noqon doonaa xulashada heerka ugu sarreeya, oo calaamadee sida aan la akhriyin waxa lagu qarin doonaa liiska More…
Markaa, taasi waa menu-ka Bidix-ku-dhufasho ee la daryeelay haddii. Midig ku dhufo waxay ku siinaysaa isla dookhyo aad ka dooran karto, laakiin marka aad si dhab ah ugu dhufatid Apple's Mail app, waxaad heli doontaa hal shay. Sidoo kale, ma samayn kartid isku amar labada dhinacba. Bidix u dhuuq oo midig u mari waa in ay tusaan doorashooyin kala duwan.
Laakiin ka waran kayd iyo tirtir?
Tani waa qaybta ugu wareersan. Gudaha Dejinta> Boostada> Xulashooyinka ku dhaq bogga, ma jiraan wax lagu xusay tirtirka. Fiiri:
Aaway ikhtiyaarka tirtirka?
Jawaabtu waxay si qoto dheer ugu aasan tahay gudaha goobaha koontada boostada kasta. Ku soco Settings> Passwords & Accounts, dabadeed ka hel akoonkaaga iimaylka liiska. Taabo, ka dibna - shaashadda soo socota - taabo Advanced. Ugu dambeyntii waxaad arki doontaa qaybta la magacaabay U rar fariimaha la tuuray:
Tani waa meesha aad kala doorato Kaydi iyo Tirtir.
Tani waa meesha aad ka dooranayso in fariimaha la tirtiray ama la kaydiyay si toos ah. Waana meesha ay arrimuhu ku jahawareeraan.
Kaydku ma la siman yahay in la tirtiro?
Haddii aad tan u dejiso Diiwaanka Sanduuqa Boosta, mar kasta oo aad doorato Kaydka Ikhtiyaarada ku xaaqida Boostada, run ahaantii waxay la macno noqon doontaa tirtirto. Inkasta oo ay weli ku qoran tahay Kaydka shaashaddaas. Tani waa sida goobaha saxda ah ay u eg yihiin:
Kaydka = tirtir. WTF?
Haddii aan dib ugu noqdo goobaha horumarsan ee gudaha Settings> Passwords & Accounts, oo u beddelo delete markaa tani waa natiijada:
Wax faallo ah ma leh runtii.
Taasina kuma dhammaan! Haddii aan u dhufto dhinaca kale, waxaan heli doonaa ikhtiyaarka aan tirtiro. Waa kuwan dhaqdhaqaajinta bidix iyo midig ee leh isla habaynta sanduuqa boostada:
Haddii aad bedesho habaynta sanduuqa boostada, dhaqankan waa la rogay.
In kasta oo aad isku dayi karto inaad tan fahamto, waxaan helay ikhtiyaarka ugu fiican waa inaad tijaabiso ilaa aad ku faraxsan tahay waxaad haysato. Ficil ahaan, doorashada archive or delete Moolka, qarsoon, shaashadda dejinta-sare ee koontadaada iimaylka kaliya ayaa isbedelaya halka kaydka iyo tirtiridda xulashooyinka ay ka muuqdaan menu-ka swipe.
Markaa, adigoo ku hubaysan macluumaadkan, waxaad ugu yaraan taqaanaa sida loo dejiyo dhammaan dookhyada dhaqdhaqaajinta, xitaa haddii “sababta” aysan sidaas u caddayn.
9 Nooc oo Sameeya Waxyaabo Gaar ah oo ku Saabsan Bulshada iyo Waxa aan ka baran karno iyaga
Turjun dukaankaaga & mareegahaaga si aad u kordhiso iibka